Lalao ho an'ny terminal fa tena tsotra ny mametraka sy mankafy | Ubunlog
Lalao ho an'ny terminal Ubuntu
Ireo tia Linux matetika dia mandany ny ankamaroan'ny fotoanantsika amin'ny fampiasana ny terminal. Tamin'ny voalohany dia mety ho somary nahasosotra ihany ny fampiasana azy, fa amin'ny farany dia lasa mpiara-miasa mahatoky izay fantatsika fa afaka manao ny zava-drehetra isika amin'ny famoronana rakitra, fandefasana mailaka, fanaraha-maso ny toetr'andro ary maro hafa.
Amin'ny mazava etsy ambony, maninona raha mandany fotoana hilalaovana amin'izany? Mazava ho azy fa tsy hisy izany lalao maoderinaSady ny state-of-the-art no tsy asian'izy ireo sary manaitra, ny mifanohitra amin'izay indrindra. Saingy tsy isalasalana dia kilasika na tsy mitovy amin'ny kilasika izay tsy miala amin'ny lamaody mihitsy noho ny fiankinan-doha ataon'izy ireo.
1 Lalao ho an'ny terminal Ubuntu
6 Buggy volana
Ao amin'ity lisitra kely ity dia tsy izay rehetra mety ho nisy, hatramin'ny misy lalao maro ho an'ny terminal ary hataon'izy ireo tsy misy farany io lisitra io. Hiezaka ny hampiseho aho, ny fahitako azy ny sasany amin'ireo lalao tsara indrindra ho an'ny terminal amin'ny Linux. Ny baiko hametrahana azy ireo izay haseho dia ho an'ny Ubuntu. Raha mila azy ireo amin'ny fizarana hafa ianao dia mila soloinao fotsiny ny "sudo apt" rehefa apetrakao amin'ny lalao misy azy toy ny "yum" na "dnf" araka izay sahaza azy ny lalao.
Iza no tsy mahatadidy ny lalao ampiasainao fiaramanidina (na zavatra mitovy amin'izany) hamonoana vahiny? Hatramin'ny fahazazako dia mpankafy an'ireny lalao ireny foana aho izay hamonoanao vahiny.
Mba hametrahana ity lalao mahafinaritra sy mampiankin-doha ity dia mila manokatra ny terminal fotsiny ianao ary manorata:
Mba handefasana ny lalao dia mila miantso azy fotsiny amin'ny anarany ianao:
Klone iray hafa amin'ny lalao mampiankin-doha fantatry ny tany rehetra (tsy misy ankanavaka). Ity no lalao bibilava mahazatra izay ho hitanao amin'ny telefaona Nokia taloha na amin'ilay navoaka amin'ity taona ity. Hitombo ny bibilava rehefa vitanao ny mitazona azy tsy hanaikitra na hidona amin'ny rindrina.
Raha hametraka nSnake dia soraty ao amin'ny terminal ity baiko manaraka ity:
Hanombohana azy dia mila miantso azy fotsiny ianao amin'ny anarany:
Ity dia klone (amin'ireo an'arivony misy) ny lalao mety ho malaza sy mampiankin-doha indrindra amin'ny tantaran'ny lalao video, Tetris.
Mba hametrahana an'ity variana an'ny Tint ity dia tsy maintsy ampiasao ity baiko manaraka ity:
Hanombohana azy dia mila manoratra fotsiny ianao:
Iza no tsy mahalala na efa nandany andro nilalao ilay pacman malaza?. Amin'ity variant ity dia afaka manana fahafinaretana mitovy amin'ny terminal Linux ianao amin'ny alàlan'ny fametrahana Pacman4Console.
Raha hametraka azy io dia mankany amin'ny terminal izahay ary manoratra:
Hanombohana azy dia antsoinay amin'ny anarany avy izy io. Amin'ity tranga ity dia tsy maintsy tadidinao ny hampitomboana ny varavarankely satria ambany ny famahana azy:
Dika hafa mahafinaritra an'ny Pacman dia MyMan. Izy io dia manana vahaolana tsara kokoa. Amin'ny manaraka rohy Azonao atao ny misintona ny fisie ilaina ary ao no haseho antsika ny fomba fametrahana azy.
Milalao ity lalao ity dia mila mandany ny fotoana mitsambikina sy mitifitra. Ireo zavatra roa ireo dia hahatonga anao hilalao mandritra ny ora maro sy ora maro. Ny hany nefa azo apetraka dia ny fiankinan-doha ambony nataony.
Mba hametrahana azy dia hovonointsika ao amin'ny terminal:
Hanomboka ny lalao dia hanoratra ny anarany izahay:
Lalao mahafinaritra ity. En el tienes que volar en un módulo lunar durante su última etapa de descenso con una cantidad limitada de combustible en los tanques.
Ity lalao ity dia azo sintonina avy ao amin'ny pejy Github ao amin'ity manaraka ity rohy.
Nudoku dia lalao famaranana mandika ny fomba Sudoku. Ny maody lalao Nudoku dia mitaky mpilalao iray, amin'ny alalàn'ny lojika, hameno ny takelaka 9 × 9 miaraka amin'ny isa 1 ka hatramin'ny 9. Manana ambaratongam-pahasarotana samihafa ianao, manomboka amin'ny ambaratonga tsotra ka mandroso.
Raha hametraka azy dia mila mankany amin'ny pejiny fotsiny ianao GitHub ary ampidino izany.
Tsy lalao tokana izy io, fa famoriam-bola misy lalao isan-karazany ho an'ny terminal izay misy ny sasany amin'ireo voalaza etsy ambony ireo. Raha te haka azy io dia tsy maintsy manaraka ireto manaraka ireto fotsiny ianao rohy ary jereo ny famaritana. Ho hitanao ao ilay rakitra fisintomana.
Amin'ity no hakatonako ity lisitra kely ity. Niezaka ny nampiseho kely ny zava-drehetra aho saingy heveriko fa hilalao na hihaona amin'ny olona mbola tsy voatonona anarana ny olona. Raha misy mahalala lalao bebe kokoa ho an'ny terminal, aza misalasala mamela azy ireo amin'ny fanehoan-kevitra.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: ubunlog » Ubuntu » Lalao ho an'ny terminal Ubuntu
Ny lesoka mahafaty dia miseho amin'ny efijery fidirana Ubuntu 17.04 sy 16.10
Azo zaraina izao ny fizarana Emmabuntus 3 1.04, miorina amin'ny Xubuntu 14.04.1 LTS